MW CMC Oo Bookh Kusugan - Cakaara News
MW CMC Oo Bookh Kusugan
Bookh(CN) Arbaco, 2dii December 2015, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftigii balaadhnaa ee xalay u dheelmaday magaalada Galaadi ee kujiray socdaalkii horumarinta cagaaran ayaa kadib kulan-waynihii ay saaka laqaateen shacabka kunool galaadi oo xogwaraysi, wadatashi iyo daraasaad isugu jiray u ambabaxay dhanka degmada bookh ee gobolka doolo.
Safarkan bookh ayay madaxwaynaha iyo waftigiisu kusii mareen qabaleeyo katirsan degmada galaadi oo ay kamid yihiin: qabalaha Tawrada iyo Baaltaag, iyo qabalaha Jidhacle oo katirsan degmada bookh.
Shacabka kunool dhamaan qabaleeyadan ayaa madaxwaynaha iyo waftigiisa si wayn u soo dhawaynayay iyagoo heerka dareenkooda farxadeed kumuujinayay mashxarad, sacab, durbaan, odhaah faneedyo, ubaxyo iyo caleemo qoyan oo ay lulayeen.
Dhanka kalana, madaxwaynaha ayaa goob kasta u istaagayay shacabka isagoo uga waramayay ujeedada socdaalkan cagaaran kadibna makarafoonka kuwareejinayay shacabka si uu u dhagaysto cabashadooda una darso xaaladooda nololeed. Shacabka ayaana aad u amaanayay waxqabadka xukuumada iyo waliba ciidanka gaarka ah ee Liyuu booliska.
Xili duhurkii ah oo ay qorraxdu kulushahay ayaana lagaadhay magaalada bookh halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay ayay madaxwaynaha iyo waftiguba kulan balaadhan kulayeesheen shacabka degmada.
Nasasho qado ah kadibna, madaxwaynaha iyo waftigiisa ayaa socod lug ah kudhexmaray jidadka suuqyada magaalada iyagoo waliba kashaaheeyay muqaaxi badhtamaha magaalada kutaala.
Ugudanbayna, madaxwaynaha iyo waftigiisa ayaa caawa kusugan magaalada bookh. Kooxaha fanka iyo suugaantuna waxay katumayaan madasha maaweelada magaalada bookh.